Muxuu Apple u oggolaan waayey shanlada on iOS? | Wararka IPhone
Muxuu Apple u oggolaan waayey shanlada on iOS?
Qolka Ignatius | | Noticias, Casharrada iyo buugaagta
Sannadkii hore, Unicode Consortium, shirkadda gacanta ku haysa naqshadeynta iyo abuurista astaamaha caanka ah ee aan u adeegsanno maalin kasta, ayaa ku dhawaaqday abuuritaanka 250 emojis cusub, oo ay ku jiraan shanlada caanka ah, Salaanta Spock's Vulcan, cajalad cajalad ah ... Dhowr ka mid ah emojisyadan ayaa ku yimid cusbooneysiinta macruufka sida salaanta 'Spock's Vulcan', halka kuwa kale sida kan shanlada leh aan waligood lagu arkin dusha sare ee wiilasha Cupertino.
Dhowr saacadood Isticmaalayaasha WhatsApp Android waxay isticmaali karaan shanlada caanka ah qalabkooda illaa inta nooca ugu dambeeya, ee wajiga beta, ee codsiga si toos ah looga soo dejisto websaydhka WhatsApp. Beta-ka nooca xiga ee WhatsApp ee macruufka ah nama siinayo shanlada, sida saaxiibkey Luis Padilla uu arkay.
Faa'iidooyinka lahaanshaha nidaam furan "furan" sida Android, ayaa ah in horumariyayaashu ay ku dari karaan shaqooyin, xaddidan, barnaamijyadooda looma baahna in la mariyo shaandhada adag ee Google Play. Xaaladda macruufka macruufka way ka duwan tahay gabi ahaanba. Emojisyada aan ku isticmaali karno iPhone-keena waxaa qeexaya Apple. Taasi waa, haddii Apple rabto inay ku darto emoticon gaar ah kumbuyuutarka emoji, waan isticmaali karnaa, haddii kale waxay noqon doontaa howl aan macquul aheyn.
Ikhtiyaar kale oo aan u isticmaali karno inaan ku isticmaalno shanlada ku jirta taleefanka iPhone-ka noqon lahaa in la rakibo kiiboodh ay ku jirtay, laakiin way cadahay in Apple uu aad u xakameynayo kumbuyuutarrada saddexaad ee aan ku isticmaali karno qalabkeena. Maxaan ugu isticmaali karin shanlada macruufka? At Apple iyagu waa kuwo aad u nadiif ah hubaalna waxay tixgelin doonaan in shucuur-xumadan loo adeegsan karo hanjabaad ama cabsi gelin dadka isticmaala. Waa sharraxaadda kaliya ee aan ka fekeri karo si aan u sharxo sababta kaliftay sannad kadib markii la heli karo, illaa maantadan aan weli lagu darin casriyeyntii ugu dambeysay ee emoticon ee macruufka 8.3 keenay.
Maqnaanshaha roodhida, wanaagsan waa keegag. Mar kasta oo aan ka hadlo WhatsApp-ka waxaan ku dhammeeyaa ka hadalka Telegram. Telegram wuxuu noo ogolaanayaa inaan shakhsiyeysano wada sheekaysigeena adoo kudaraya istiikarada qaaska ah. Istiikaaradaas waxaa lagu soo bandhigaa dhammaan aaladaha ku rakiban Telegram iyadoon loo eegin nooca ay adeegsadaan. Markii ay Apple sii deysay macruufka 8.3 ee emoticons-ka cusub, kaliya isticmaaleyaasha noocaas rakibay ayaa isticmaali kara oo arki kara emoticons-kaas. Iyada oo leh Telegram taas oo aan dhicin.
Haddii aad xiiseyneyso inaad u gudbiso dhammaan xiriiradaada hal mar iyo dhammaanteed Telegram, halkan waa fiidiyoow aan ku tuso sida aan ugu abuuri karno istiikaradayada Telegram. Istiikaarada oo madax ka ah sawirka boostadan ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu cadcad ee aan ugu isticmaalo Telegram, iyadoo uusan jirin shanlo rasmi ah, istiikarada leh shanlo oo aad u ballaaran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Muxuu Apple u oggolaan waayey shanlada on iOS?
Hagaag miyay horumariyayaashu joojin karaan wax aan micno lahayn oo ay xallin karaan dhibaatada isku dheelitirka maktabada muusikada ee icloud markay ku biirayaan midka uu haystay ka hor muusikada tufaaxa, ma doonayo inaan ka fikiro inay noqon karto dhaqdhaqaaq sidaas darteed dhammaan muusikada ku jirta terminaalku wuxuu ka yimaadaa muusiga tufaaxa… ..
Jawaab Alejandro Jesus Moreno Ferro
Telegram Nooloow !!!
Gooryaanka 3, qaybta saddexaad ee dagaalka u dhexeeya dirxi waa adeegsiga usbuuca